Abuurista iibiyaha | Martech Zone
Isniin, Janaayo 7, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Iyada oo dhammaan horumarka laga sameeyay suuqgeynta, shaki kuma jiro in iibintu ay ahayd inay ka jawaabto oo ay la qabsato isbeddelada ku yimid cilmi baarista iyo dhaqanka wax iibsiga dadka. Laga bilaabo 1800-meeyadii, sawir-gacmeedkan ka Tababarka Caskey wuxuu faahfaahinayaa dhaqaalaha jira, xeeladaha iibiyaha, habdhaqanka macaamiisha, istiraatiijiyadda, iyo falcelinta.
Sideebaan u helnay halkan? Macluumaadka hoose wuxuu ku siinayaa xoogaa aragti ah sida aan u aragno adduunka xirfadleyda iibinta maanta waxayna kaa caawineysaa inaad dib uga fikirto doorkaaga iibin. Si aad u sii indha indheeysid mowduucan, dhagayso boodhadhka ama fiirso fiidyawaan.
Tags: Tababarka Caskeyisbedelka iibiyahataariikhda iibkaSuuqgeynta SuuqgeyntaKordhinta Iibkatababarka iibkaiibiye